जब बुहारी विवाहपछि भित्रिइन् तब केटाकी आमा बेहोस भइन्:होस खुलेपछि बिहे अस्वीकार! |
जब बुहारी विवाहपछि भित्रिइन् तब केटाकी आमा बेहोस भइन्:होस खुलेपछि बिहे अस्वीकार!
February 17, 2022 adminLeaveaComment on जब बुहारी विवाहपछि भित्रिइन् तब केटाकी आमा बेहोस भइन्:होस खुलेपछि बिहे अस्वीकार!
काठमाडौं । हरेक समयमा हाम्रा वरिपरी अच्चमका घटनाहरु भइरहका हुन्छन् । यस्तै एक आश्चर्यजनक घटना भारतबाट आएको छ । भारत, बिहारको सासाराममा त्यस्तो घटना देख्नमा आएको हो । सो कुरा अहिले जताततै चर्चाको विषय बन्यो ।जब बुहारी विवाह पछि ससुराको घरमा पुगिन्, तब केटाकी आमा उनलाई देखेर बेहोस भइन् । जब सासु होसमा आइन्, उनले छोराको विवाहलाई स्वीकार गर्न मानिनन् ।
भएको के भने उनको छोराले किन्नर (भिन्न पहिचान भएकी) सँग विवाह गरेका थिए ।त्यसकारण, समाजको कारण, ति महिलाले उनीहरू दुबैलाई घरबाट बाहिर निकालिन् ।यो सबै दृश्य सासाराम जिल्लाको कारघरमा देखा परेको थियो । किन्नरसँग विवाह गर्ने युवकको घरमा बबाल भयो ।
परिवारका सदस्यहरू कुनै शर्तमा बुहारी स्वीकार गर्न तयार थिएनन् । जानकारी अनुसार कर्गहारका गोलू पहिले डान्स पार्टीमा काम गर्थे । यसैबीच उनी पानापुर निवासी किन्नर नन्दनीसँग प्रेममा परेका रहेछन् ।दुवैले सँगै बस्ने निर्णय गरेर बिहे गरेको बयान दिएका छन् । विवाह पछि गोलू आफ्नी श्रीमती नन्दनीसँग कारघरको एउटा भाडाको घरमा बस्दै थिए । परिवारका सदस्यहरूले जब यो कुरा थाहा पाए, उनीहरुले दबाब दिएर छोरालाई किन्नर बुहारीबाट अलग गर्ने प्रयास नगरेका हेईनन् ।
तर जब केहि सिप नलगोपछि उनीहरूले आफ्नो छोरोलाई घरमा ल्याएर राम्रोसँग सम्झाएका थिए । कुरा त्यसबेला गडबड भयो जब नन्दनी आफ्नो पति खोज्दै गइन् ।गोलूलाई खोज्दै उनी आफ्नो घर अर्थात् ससुरालीमा पुगिन् । किन्नर बुहारीलाई देखेर सासु बेहोस भइन् ।
अवस्था झनै खराब हुँदै गयो तब नन्दिनीले आफ्नो सासुलाई पानी छिम्केर होसमा ल्याउने प्रयास गरिन् । यो दृश्य देखेर वरपरका मानिसहरू आफ्नो घरतिर लाग्न थाले ।सासू होसमा आउने बित्तिकै उनले घरकी नयाँ बुहारीलाई घरनिकाला गरिन् । त्यसपछि त्यो केटा पनि आफ्नी श्रीमतीसगै गयो । दुबै पति र पत्नी नजिकको आफन्तको घरमा गएर बसेको खुलेको छ ।
अब आउने महिना झन धेरैले महंगी बढ्ने?पर्ने भयो दुखी गरीबलाई नसोचेको मर्का।
चेकजाँच गर्ने क्रममा झोलाभित्र जे भेटियो त्यो देख्दा प्रहरीनै चकित…
हुने भयो २ दिन बिदा।यो दिन देखी बिदा सुरु हुने
खुसीको खबर:मात्र रु.१००।दशैं-तिहार नजिकिदै गर्दा सोच्नै नसकिने गरि घट्यो खसी-बोकाको मासुको मुल्य,पुरा पढ्नुहोस